Enweghị m mmasị na ya! | Martech Zone
Wenezdee, Machị 14, 2012 Wenezdee, Machị 14, 2012 Douglas Karr
Ndị a bụ ma eleghị anya okwu 4 kachasị njọ ị nwere ike ịnụ dị ka ụlọ ọrụ si n'aka onye ahịa gị. Dịghị mgbe gị na ya n'agbanyeghị na ọ na-eme pụtara mgbe mgbe. Ndị mmadụ na-ewe ndị nrụpụta ime ihe ahụ agaghị ekwe omume… Sere ọhụ site n'isi ha ma tinye ya n'ime onyonyo, saịtị, vidiyo ma ọ bụ ọbụlagodi akara.
Kasị njọ, ọ bụ obere azịza dị mkpa. Ọ baghị uru ma ọ masịrị gị. Ọ bụrụhaala na imepụta ihe agaghị emebi akara gị ma ọ bụrụ na e mepụtara ya nke ọma, ịkwesịrị iloda mpako gị na echiche gị ma hụ ihe na-eme. Ndị na-ese ihe bụ otu dị ịtụnanya… kwa ụbọchị na - emekọ ihe na - adịghị emerụ ahụ karịa nkezi na - atọ ọchị. N'adịghị ka ndị na-atọ ọchị, onye mmebe ahụ ga-ajụ maka nzaghachi (aka heckling).
Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji nyere gị aka ịnagide ịhapụ imewe mmebe:
Gị pụrụ ichetụ n'echiche nwere ike mgbe ka a ghaghachitere n'ime ụwa n'ezie. Mgbe.
ị bụ ọ bụghị onye mmebe. Ohere inweta bụ, ha do mara ihe ka mma.
Ihe a haziri bụ ọ bụghị maka gị. Imewe bụ maka ndị na-ege gị ntị.
A akwa mmebe ga-arụ ọrụ ike iji zute ebumnobi nke imewe mgbe ụtọ gị na-arịọ na nzaghachi… bụghị chepụta gị na-arịọ.
Inye gị mmebe na nnwere onwe imepụta ihe ga-ewepụta ihe kacha mma.
Lekwasị anya na nsonaazụ nke atụmatụ ahụ, ọ bụghị atụmatụ ahụ n'onwe ya, iji tụọ ọganiihu ya.
Ọ bụrụ na ị dị arọ na ntinye nke imewe ma ọ naghị arụ ọrụ, ebola onye mmebe ahụ.
Dịka ndị ọchụnta ego, ị na-echekarị na ị ma nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-aga nke ọma, mgbe ụfọdụ, ọ bụ ọbụna ihe siri ike ga-esi n'ụzọ na-ekwe ka gị mmebe na-arụ ọrụ. Ka anyị na-azụlite infographics na saịtị, anaghị m enwe mmasị na ihe e kere eke… mana ana m eweda onwe m ala na mgbe m batara n'ụzọ kama na-apụ n'ụzọ, atụmatụ ndị ahụ kụrụ afọ n'ala.
Ndị na-emepụta ihe dị ukwuu na-ajụ ọtụtụ ajụjụ ma nwedịrị ike ịnye ụfọdụ ihe atụ, drafts na iterations maka nzaghachi gị. Anaghị m agwa gị okwu itinye ego na atụmatụ ị na-eleda anya; ka emechara, ị na-akwụ ụgwọ ya na ịkwesịrị ibi na ya. Ma ọ bụrụ na ọ bụ a imewe na-arụ ọrụ na ọ bụchaghị gị ịke, na-ohere na-ahụ ihe na-eme!
Gbalịa ịghara ịsị, “Enweghị m mmasị na ya!”.
Tags: designihe ọsịseatụinfographicdị kaweb imewe
Enweghị ike ikwenye gị karịa, Douglas. Ndị ahịa na-eyikarị ịchụ onye nrụpụta ka onye ahịa wee nwee ike ịmepụta nke ha, ebe a na-atụgharị nka nke onye na-ese ihe maka ihu ọma Adobe. Ahịa na-aghọta na a eru mmebe adịghị nnọọ maara ha ngwá ọrụ - ha makwaara “imewe,” nke bụ nnukwu akụkụ nke ọrụ ha. Ọzọkwa, ndị ahịa na- echefukarị atụmatụ a maka ndị na-ege ha ntị, ọ bụghị ha.
N'akụkụ tụgharịa, ndị na-ese ihe na / ma ọ bụ ndị njikwa ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ha na-eme ka ndị ahịa ha tozuo ma na-agwa ha okwu ka o kwere mee. Ndị ahịa anaghị ama otu esi ekwupụta ebumnuche ha, yabụ inwe mkparịta ụka mara mma na ndị ahịa bụ ihe dị mkpa. Nakwa, ọtụtụ “ndị na-ese ihe” na-efunahụ akara ahụ, ma ọ bụ na ha abụghị ihe ha kwuru na ha bụ, na enweghị ike ịkepụta nnukwu mpempe akwụkwọ na-emezu ebumnuche ndị ahịa ọ bụla, agbanyeghị otu esi gosipụta ya nke ọma. Echere m na ụfọdụ ndị ahịa nwere ike ịgwụ ike nke a, kwa.
Are bụghị onye ahịa gị.
Ọ bụrụ na ị masịghị ya, gịnịzi?
O siri ike ịnabata — mana ọ bụ eziokwu!
Bochum kachasị mma
Ọfọn, ndị ahịa na-aga ebe ahụ mgbe niile ebe ọ na-akwado ya ma ejiri m n'aka na onye ọ bụla maara nke a. Ma oge ụfọdụ anyị na-ekwenye na ndị ahịa na-enweghị otu penny. Dị ka m "Tụkwasịrị obi" bụ okwu dị mkpa na azụmahịa.
I cant ịgwa gị ugboro ole mgbe m hụrụ ihe m na-ajụ banyere nke a tweak ma ọ bụ na tweak ma ọ bụ echiche dị n'azụ ya nanị iji nweta a nzaghachi akin na "M na-agbalị na ugbua" zoputa ihe omuma nke ihe m kwuru ka m wee hu onwe m. Mgbe ọtụtụ n'ime arịrịọ ndị ahụ gbasara ọrụ dịgasị iche iche, amalitere m ịjụ ajụjụ ọzọ n'ihi na ha mechara mara nke ọma.
Ọzọkwa Id tinye dont nduru onu gị mmebe ma ọ bụ ihe okike otu site n'ịnyeghị ha ezu nhọrọ ma ọ bụ nzaghachi elu n'ihu.